2007 – Year – Burmese Subtitle
Mr. Bean’s Holiday (2007) ဒီဇာတျလမျးလေးရဲ့ အစမှာတော့ Mr.Beanက ကံကောငျးတယျဗြ။ကနျးနကျဈ ကို ခရီးသှားဖို့ လကျမှတျရယျ ဗှီဒီယိုကငျမရာလေးတဈလုံးရယျ ယူရို ၂၀၀ ရယျ မဲပေါကျခဲ့တာကိုး (ဒါတောငျဆရာသမားက တလှေဲ့ လှဲဦးမို့) ပထမရထား လှတျ ဖွဈအောငျလှတျသှားသေးတဲ့ Mr.Bean ဟာ ဒုတိယ ရထား ဆိုကျပွနျတော့လညျး လူတဈယောကျကို သူလမျးလြှောကျနတေဲ့ပုံ ဗှီဒီယို ရိုကျခိုငျးရငျးနဲ့ အလှဲတှဖွေဈပွနျရော။ သူ့ကို ဗှီဒီယို ရိုကျပေးနတေဲ့သူက ရထား လှတျသှားတယျလေ။ဒါနဲ့ ရထားပျေါမှာ ပါလာတဲ့ အဲ့လူရဲ့ သားကို စောငျ့ရှောကျဖို့ Mr Bean မှာ တာဝနျရှိလာပါတော့တယျ။ ဒီသားအဖကို ပွနျဆုံအောငျ Mr.Bean လုပျပေးနိုငျမလား ဘယျလို အလှဲတှေ ထပျဖွဈမလဲ ဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးလှပါတယျ။ဇာတျသိမျးလေးကိုလညျး ကွညျနူးဖှယျဖွဈအောငျရိုကျကူးပွထားပါတယျ။ ဟာသဆိုပမေယျ့ ကလိထိုးပွီးရယျရတာမြိုးမဟုတျဘဲ ပေါ့ပေါးပါးပါးနဲ့ ယုတ်တိရှိရှိ ရိုကျပွထားတာကွောငျ့ ရုပျရှငျခဈြပရိသတျတှအေနနေဲ့ အကွိုကျတှကွေ့မှာဖွဈပါတယျ။ Review Credit
Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) သညျ IMDb 7.5/10 Roger Ebert 2.5/4 Metacritic 71% Google users 96 % ဒါရိုကျတာ David Yates ရိုကျကူးထား၍ Michael Goldenberg, J.K. Rowling က ဇာတျလမျးဇာတျညှနျးရေးသားကာ သရုပျဆောငျ Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသော Adventure, Family, Fantasy ဇာတျကားကောငျး တဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ခဈြခွငျးအားဖွငျ့ တငျဆကျလိုကျပါရစေ… အရှငျဗောဒီမော့တျပွနျလာမှုကို သတိပေးခကျြနဲ့ အတူ ဟယျရီ နဲ့ ဒမျ့ဘလီဒိုတို့က ပဈမှတျအထားခံရကာ ဟောဝတျရဲ့ ပါဝါတှကေို တဈဖွညျးဖွညျးခငျြးဝါးမြိုအောငျ ကွိုးစားမှုကို ဘယျလို ကာကှယျသှားမလဲ ဇာတျကားမှာ ...
28 Weeks Later (2007) 28 Weeks Later (2007) မွနျမာစာတနျးထိုး IMDb7Rotten Tomatoes 70% Metacritic 78% ရထားတဲ့ 28 weeks later ဇာတျကားဟာတော့သာမနျ ရောဂါကူးစကျတဲ့ zoombie ကားတှနေဲ့မတူဘဲ အခဈြမတ်ေတာ အတိမျအနကျ ကိုပါတှမွေ့ငျနိုငျမှာပါ ရောဂါကိုအမွဈပွတျသလောကျရှငျးနိုငျခဲ့ပွီး အင်ျဂလနျရဲ့ ခရိုငျလေးမှာ ပွနျလညျထူထောငျခဲ့ပမေယျ့ မမြှျောလငျ့တဲ့ အဖွဈဆိုးက ကံကွမ်မာတပတျပွနျလညျလာသောအခါဝယျ... မလှတျတမျးကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားတကားဖွဈကွောငျးသာညှနျးပါရစေ Review Credit
IMDB: 7.0/10 250,109 votes
Evan Almighty (2007) ဒီကားကတော့ ရှကေ့ Bruce Almighty ရဲ့ Sequelဆိုပမေယျ့ ဘာမှမသကျဆိုငျတဲ့ Standalone sequelပါ။သူ့ခညျြးသကျသကျကွညျ့လညျးရပါတယျ။ ဇာတျလမျးအညှနျး​ပွောရမယျဆိုရငျတော့ သတငျးတငျဆကျသူ Presenter Evan Baxterဟာ လှတျတျောအမတျအဖွဈ ရှေးကောကျခံရပွီး ဗာဂြီးနီးယားက Prestige crestကိုမိသားစုလိုကျ အိမျပွောငျးလာပါတယျ။ သူဟာ လှတျတျောအမတျရှေးခံရဖို့မဲဆှယျတဲ့အခါတိုငျး ကမ်ဘာကွီးကို ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ အခြိနျတနျပွီလို့ပွောပွီးမဲဆှယျပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ Godဆီမှာ ကမ်ဘာကွီးကို ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ အကူအညီပေးပါလို့ဆုတောငျးပါတယျ။ နောကျတဈနမေ့နကျမှာတော့ သူ့ရဲ့နှိုးစကျဟာ၆နာရီ၁၄မိနဈမှာရပျနပေါတယျ။ သူ့အိမျရှကေို့လညျး သဈသားခြောငျးတှရေောကျနပေါတယျ။ အဲ့သဈသားတှပေျေါမှာ Godကပျေါလာပွီး လှကွေီးတဈစီးကိုတညျဆောကျဖို့ပွောပါတယျ။ Godဟာ ကမ်ဘာဦးတုနျးက နောဧကို ကမ်ဘာကွီး ရလှေမျးတော့မှာမို့ လှကွေီးတဈစီး တညျဆောကျခိုငျးခဲ့သလိုပါပဲ။ အခုလညျး ရလှေမျးတော့မှာမို့ Evan Baxterကိုခိုငျးတာပါ။ Evanကတော့လကျမခံခဲ့ပါဘူး။ ရုံးကိုသှားတော့လညျး သူကွုံသမြှနရောတိုငျးမှာ ၆ ၁၄ ဂဏနျးတှကွေီးစိုးနပေါတော့တယျ။ တကယျတော့ အဲ့ဂဏနျးတှဟော- "ကမ်ဘာဦးကမျြး အခနျး ၆ အပိုဒျ၁၄ ဂေါဖရသဈသားဖွငျ့ သင်ျဘောကို ကိုယျဘို့ တညျလုပျလော့။ အထဲ၌လညျး အခနျးမြားကို လုပျလော့။ အတှငျး၊ ပွငျ၊ ပတျလညျကို ထငျးရူးစေးနှငျ့သုတျလော့။ " ဆိုတဲ့စာသားကို ဆိုလိုမှနျးသူသိသှားခဲ့တယျ။ သူ့နောကျကို တိရစ်ဆာနျပေါငျးမြားစှာ အဖိုနဲ့အမတဈစုံစီ သူသှားလရော ...
IMDB: 5.4/10 133,929 votes
Live Free or Die Hard (2007) 1995 နောကျပိုငျးထဲက ပြောကျကှယျသှားတဲ့ မငျးသားကွီး Bruce Willis သရုပျဆောငျထားတဲ့ Die Hard Movies တှဟော 2007 ခုနှဈမှာ Die Hard ရဲ့ ၄ကားမွောကျကိုထပျမံထှကျရှိလာခဲ့ပါတယျ... ဒီ Die Hard တှကေတော့ ကြှနျတျောကွညျ့ဖူးတဲ့ Die Hard တှထေဲမှာ အကွိုကျဆုံးလို့ဆိုရမှာပဲ... ဒီတော့ အညှနျးတှဘောတှလေုပျနတောထကျ ဇာတျလမျးကို ကှာလတီအလနျးနဲ့သာကွညျ့ပတေော့ဗြို့...
IMDB: 7.1/10 378,320 votes
The Bourne Ultimatum (2007) မတ်ဒေမွန် (Matt Damon) က စီအိ်ုင်အေ အေးဂျင့်ဟောင်း ဂျေဆန်ဘွန်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Jason Bourne ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ရုပ်ရှင်ရုံမှာ အစိမ်းသက်သက် သွားကြည့်ရင် တစ်လုံးမှ နားမလည်ပဲ သွက်သွက်ခါ သွားနိုင်စရာရှိပါတယ်။ ၁-ဂျေဆန်ဘွန်း ဘာကြောင့် အသက်လုပြေးနေရတာလဲ ? ၂-ဂျေဆန်ဘွန်းကို စီအိ်ုင်အေ က ဘာကြောင့် တွေ့ရာသင်္ချိုင်း ဓားမဆိုင်း လိုက်သတ်ချင်နေရတာလဲ ? ၃-ဂျေဆန်ဘွန်း ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ အော်ပရေးရှင်းထရက်စတုန်း (Operation Treadstone) ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် တွေကရော ဘာတွေလဲ ? ၄-အော်ပရေးရှင်းဘလက်ခ်ဘရိုင်ယာ (Operation Blackbriar) ကရော ဘယ်လို ဘယ်လိုစစ်ဆင်ရေးမျိုးလဲ ? ၅-တစ်ခါ အော်ပရေးရှင်းအောက်တ်ကမ်း (Operation Outcome) နဲ့ ပတ်သက်မိတဲ့ အေးဂျင့် အေရွန်ခရော့စ် ကပါ ဘာကြောင့် ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးနေရတာလဲ ? ဒါတွေသိထားမှ ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်လို့ နားလည်မှာ။ ...
IMDB: 8.0/10 579,967 votes
Hitman (2007) Hitman Agent 47 ရဲ့ ပထမဆုံးဇာတ်ကားလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ BS ရဲ့ကွာလတီနဲ့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ File Size – 1.51 GB Quality – Blu-Ray 1080p 6CH Running Time – 1h 35min Format – mkv Genre – Action, Crime, Drama Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Ye Thant Oo Encoded By – Robinn Hood
IMDB: 6.3/10 152,718 votes
National Treasure: Book of Secrets (2007) National Treasure: Book of Secrets (2007) သည် IMDb 6.5/10 Googluse User 89% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jon Turteltaub က ရိုက်ကူးထား၍ Marianne Wibberley, Cormac Wibberley က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Family ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Benjamin Gates သည် Abraham Lincoln ကို လုပ်ကြံမှုတွင် သူရဲ့ အဘိုး အပြစ်ကင်းကြောင်း သက်သေပြရန် John Wilkes Booth ရဲ့ဒိုင်ယာရီထဲမှ ချန်ထားသော သဲလွန်စနောက်ကို လိုက်ရင်း အမှုမှန်ပေါ်မည်လား မပေါ်မည်လား ဇာတ်ကားတွင် ...
IMDB: 6.5/10 201,696 votes
Butterfly onaWheel (2007) ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်သူတွေကတော့ နာမည်ကြီးမင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Pierce Brosnan (ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသားဟောင်း၊ Gerard Butler (300, Olymps Has Fallen မင်းသား) တို့ပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်တဲ့အတွက် ပိတ်သတ်ကြီး စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်သူကတော့ Nay Win ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အညွှန်းကို ပြောလိုက်ရင် spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မရေးတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူရေးထားတဲ့ အညွှန်းလောက်ပဲဖတ်ပြီး ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရင် ပိုအရသာရှိမှာပါလို့ ထပ်မံညွှန်းလိုက်ပါရစေ။ အညွှန်း ရုပ်ရှင်အညွှန်းတော့ မပြောပြချင်တော့ပါဘူး ။ အညွှန်းပြောပြမိလို့ သိသွားရင် ကြည့်လို့ကောင်းတော့မယ့် အမျိုးအစားတော့ မဟုတ်ဘူး ။ အောင်မြင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းမိသားစု တစ်စုရှိတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့ သမီးကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး အကြပ်ကိုင် ခိုင်းစေခြင်းကို ခံရတယ် ။ ခိုင်းစေမှု အားလုံး ချောချောမွှေ့မွှေ့ လုပ်နိုင်မလား ၊ မလုပ်နိုင်မလား ဆိုတာတော့ ...... အဲဒိထက်ပိုညွှန်းရင် ...
IMDB: 6.7/10 28,067 votes
Saw IV (2007) Saw IV (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး ****************************** Saw ဆိုရင် လူတော်တေ်ာများများလည်းသိဖူး ကြည့်ဖူးသလို လူကြိုက်အများဆုံးလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.... သွေးထွက်သံယို များစွာနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကို ဂိမ်းကစားပြီးသတ်ခိုင်း ဖျတ်ခိုင်း ခုတ်ခိုင်းနဲ့ ကြည့်ရှုသူအဖို့မှာ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်သီချင်းလို ဖုတ်လိုက်..ဖုတ်လိုက် ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာ မညာချင်စမ်းပါနဲ့ ကဲကဲ...ထားလိုက်ပါတော့.... ဒီဇာတ်ကားဟာစုစုပေါင်း ၇ ကားရှိပြီးတော့ ၇ကားလုံးဟာ ကြောက်ဖုတ်ကောင်းပါတယ်...ဆောရီး..ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြောတာ............. ဒီလိုအေးချမ်းတဲ့ညလေး...အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်မထွက်ချင်တဲ့သူတွေ... အခန်းလေးထဲမှာ စောင်လေးကွေးပြီးတော့ ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ရယ်... BS ကတင်တဲ့ Saw ဇာတ်ကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့.... တူတူကြောက်လိုက်ရအောင်.... အညွန်းကိုတော့ အများကြီးရေးပေးမနေတော့ဘူးဗျ လူတိုင်းလည်းသိကြတာကိုးး ဒီဇာတ်ကား ၇ ကားလုံးကိုဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ ညီမလေး အိန်ဂျယ်စွာတေးလန် ဖြစ်ပြီး Sai Wunna[Nokime Kugachichiki] မှ 1080p ဖြင့် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နော် File Size – 1.52 GB Quality- BluRay 1080p 6CH Running Time – 1:35:31 Format – mkv Genre – Horror, Mystery Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Angel Swar Tae Encoded By – Sai Wunna [Nokime Kugachichiki]
Resident Evil: Extinction (2007) Raccoon City ဟာ ဖုတ်ကောင်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်များအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုဦးတည်ထားပါတယ် အဲလစ်တစ်ယောက်ဟာ ဒီဖြစ်ရပ်တွေအပြီးမှာ Umberlla Corp ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီးနောက် တစ်ကိုယ်တော်ခရီးထွက်လာခဲ့ရာမှ Nevada သဲကန္တာရတွင်းရှိ Kmart တစ်ခုမှ လမ်းညွှန်မြေပုံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ရာမှ လမ်းခုလတ်တွင် ဇွန်ဘီကျီးကန်းများတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒုက္ခတွေ့နေတဲ့ ကလာရာရက်ဖီးလ် ဦးဆောင်တဲ့ ရှင်ကျန်သူတစ်စုနဲ့ပူးပေါင်းမိပြီး Las Vegas ကိုခရီးထွက်ခဲ့ရာ သူတို့ရဲ့သွားလိုတဲ့ပန်းတိုင်ကို ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်နိုင်ပါ့မလား ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ အဲလစ်ရဲ့စိတ်စွမ်းအင်ဟာလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ပိုအားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Review Credit to Original File Size – 1.49 GB Quality – Blu-Ray 1080p 6CH Running Time – 1hr 33min Format – mkv Genre – Action, Horror, Sci-Fi Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Aung Myint Oo Encoded By – K#/4nt_M1nn_K0
August Rush (2007) 2007 ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားပြီး ကြည့်ရှုသူများအဖို့ဇာတ်လမ်းအစကနေ အဆုံးထိ music ရသကို ခံစားစေရင်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ မိဘကိုမျှော်လင့်တောင့်တမှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကို ခံစားမှုအပြည့်ပေး စွမ်းနိုင်တဲ့ဒရမ်မာ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ကလေးငယ်လေး အီဗန် ( Freddie Highmore ) ရဲ့ ဂစ်တာကို ကျွမ်းကျင်စွာတီးခတ်ပြသမှုကလည်းကျွန်တော်တို့လို music ကို ရူးသွပ်သူအဖို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းဂီတရသကို မက်မောစွာကြည့်ရှုနေမိစေတယ်။အမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ လူးဝစ် နဲ့ လိုင်လာ တို့ရဲ့ မြင်မြင်ချင်းချစ်သွားတဲ့ အချစ် . အဲ့ဒီညမှာပဲ ချစ်တင်း နှောခဲ့မှုနဲ့ တစ်ညလေးတွေ့ခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက်ရဲ့တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် စွဲစွဲလမ်းလမ်း ချစ်ခင်မှုဟာ အရမ်းကိုအံ့သြစေပြီး ကံကြမ္မာရဲ့လှည့်ပြောင်းမှုအောက်မှာပဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ အပိုင်းထဲကတစ်ချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးဇာတ်လမ်းကို မပြောပြဘဲ အခုလိုမျိုး တင်စားပြောဆိုမှုတွေဟာကြည့်ရှုသူများအဖို့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိ စေမှာဖြစ်လို့ မိမိကိုယ်တိုင်သာ ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပဲ ကျွန်တော် တိုက်တွန်းရင် BS ဖန်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..... ဘာသာပြန်ကတော့ ကိုတုန်းတုန်း(Tone Tone) ...